ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆီရာခိုင်နှုန်းကို လိုက်ပြီး ပုံစံက ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲ? - For her Myanmar
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း သူတို့အခြေအနေသိသွားအောင် မန်းရှင်းလေးခေါ်ပြလိုက်ပါဦး
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ ကိုယ်ဝလား၊ ပိန်လားဆိုတာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာက ဒီအဆီတွေပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဝိတ်အနည်းအများက ကြွက်သားကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သေးတာကိုး… တချို့ခန္ဓာကိုယ်ကျစ်နေပေမဲ့ ဝိတ်သွားမေးလိုက်ရင် ကိုယ်တွေတောင် ဖျားသွားရမယ့် အကွက်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ နှင်းကို ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ခန္ဓာကိုယ်က ကြီးတယ်လို့ မထင်ရပေမဲ့ ဝိတ်က ၁၁၂ လောက်ရှိနေတာမျိုးပေါ့ 😛 ဆိုတော့ အောက်မှာနှင်းပုံလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်။ ကိုယ်က ဘယ်အခြေအနေရှိနေလဲ တစ်ချက်ရှိုးပြီး လုပ်စရာရှိတာလုပ်တော့ပေါ့နော်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံအရ ယောကျာ်းလေးတွေထက် အဆီပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အဖု အဖောင်း အမို့ အမောက်တွေ ရှိတာပေါ့… အဆီ % ကိုလိုက်ပြီး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေကတော့ –
၁၀% ကနေ ၁၅% အထိကတော့ အားကစားမယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီပိုမရှိကျစ်လျစ်နေပြီး ကြွက်သားတွေလည်း ပြတ်ပြတ်သားသားပေါ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမျိုးပါ။
၁၅% ကနေ ၂၅% ကတော့ ယောင်းတို့မျက်လုံးထဲ သေချာမြင်သွားအောင်ပြောရရင် အခု Miss တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့။ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ်အသွယ်သွယ်ရှိပြီး ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ (ဥပမာ ဗိုက်၊ ခါး၊ ပေါင်သား) အဆီပိုမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၅% အထက်ကနေ ၃၀% ကတော့ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စနဲ့ အဆီလေးတွေစထွက်လာပြီး ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်မျိုးပါ။ အဆီနည်းနည်းပါတဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှလေးတွေပေါ့။
၃၀% အထက်ကနေ ၃၅% ကတော့ ကစ်တုတ် ခန္ဓာကိုယ် ပိုင်ရှင်လေးတွေပါ။ ဗိုက်ခေါက်လေးတွေ လက်မောင်းနောက်သား အဆီလေးတွေ၊ ပေါင် ခပ်တုတ်တုတ်လေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ Signature ပေါ့လေ။
၃၅% အထက်ကတော့ ဝသွားပါပြီရှင်။ ဘယ်လိုမှဖုံးဖိမရအောင် ဝသွားပါပြီနော်။ လှဖို့ မလှဖို့ထက် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် မဖြစ်မနေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့၊ အစားရှောင်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီ% တွေအရမ်းများနေပါတယ်လို့။
ကဲ ယောင်းယောင်းတို့ ဘယ်နှယ်ရှိစ? ကိုယ်က ဘယ်အခြေအနေထဲ ရောက်နေပြီလဲ?
အခု အဆီ% ကိုကြည့်တယ်ဆိုတာ ပိန်တာဝတာ၊ လှတာမလှတာထက် ကျန်းမာရေးကိုပိုပြီး လိုက်စားစေချင်လို့ ရေးလိုက်တာပါနော်။ မျိုးရိုး၊ ဟော်မုန်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို လိုက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားက အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သေးတာမို့ အဆီနည်းအောင် နေရင်ပဲ ရပါပြီလို့။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း တခြား Fitness ဆောင်းပါးလေးတွေ ထပ်တင်ပေးဦးမှာမို့ ဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်!!!
ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှကေိုလညျး သူတို့အခွအေနသေိသှားအောငျ မနျးရှငျးလေးချေါပွလိုကျပါဦး
ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးမှာ ကိုယျဝလား၊ ပိနျလားဆိုတာကို အဆုံးအဖွတျပေးမှာက ဒီအဆီတှပေါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဝိတျအနညျးအမြားက ကွှကျသားကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျသေးတာကိုး… တခြို့ခန်ဓာကိုယျကဈြနပေမေဲ့ ဝိတျသှားမေးလိုကျရငျ ကိုယျတှတေောငျ ဖြားသှားရမယျ့ အကှကျတှရှေိတတျပါတယျ။ ဥပမာ နှငျးကို ရုတျတရကျကွညျ့ရငျ ခန်ဓာကိုယျက ကွီးတယျလို့ မထငျရပမေဲ့ ဝိတျက ၁၁၂ လောကျရှိနတောမြိုးပေါ့ 😛 ဆိုတော့ အောကျမှာနှငျးပုံလေးတှထေညျ့ပေးထားတယျ။ ကိုယျက ဘယျအခွအေနရှေိနလေဲ တဈခကျြရှိုးပွီး လုပျစရာရှိတာလုပျတော့ပေါ့နျော။
မိနျးကလေးတဈယောကျက ခန်ဓာကိုယျတညျဆောကျပုံအရ ယောကျြားလေးတှထေကျ အဆီပိုမြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အဖု အဖောငျး အမို့ အမောကျတှေ ရှိတာပေါ့… အဆီ % ကိုလိုကျပွီး ဖွဈလာနိုငျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားတှကေတော့ –
၁၀% ကနေ ၁၅% အထိကတော့ အားကစားမယျတဈယောကျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျဖွဈပါတယျ။ အဆီပိုမရှိကဈြလဈြနပွေီး ကွှကျသားတှလေညျး ပွတျပွတျသားသားပျေါနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျပုံစံမြိုးပါ။
၁၅% ကနေ ၂၅% ကတော့ ယောငျးတို့မကျြလုံးထဲ သခြောမွငျသှားအောငျပွောရရငျ အခု Miss တှရေဲ့ခန်ဓာကိုယျပေါ့။ ရှိုကျဖိုကွီးငယျအသှယျသှယျရှိပွီး ကနျြတဲ့နရောတှမှော (ဥပမာ ဗိုကျ၊ ခါး၊ ပေါငျသား) အဆီပိုမရှိတဲ့ခန်ဓာကိုယျပုံစံလေးတှေ ဖွဈပါတယျ။
၂၅% အထကျကနေ ၃၀% ကတော့ ဟိုတဈစ ဒီတဈစနဲ့ အဆီလေးတှစေထှကျလာပွီး ဖှံ့ဖှံ့ထှားထှား ခန်ဓာကိုယျပိုငျရှငျမြိုးပါ။ အဆီနညျးနညျးပါတဲ့ လုံးကွီးပေါကျလှလေးတှပေေါ့။
၃၀% အထကျကနေ ၃၅% ကတော့ ကဈတုတျ ခန်ဓာကိုယျ ပိုငျရှငျလေးတှပေါ။ ဗိုကျခေါကျလေးတှေ လကျမောငျးနောကျသား အဆီလေးတှေ၊ ပေါငျ ခပျတုတျတုတျလေးတှကေတော့ သူတို့ရဲ့ Signature ပေါ့လေ။
၃၅% အထကျကတော့ ဝသှားပါပွီရှငျ။ ဘယျလိုမှဖုံးဖိမရအောငျ ဝသှားပါပွီနျော။ လှဖို့ မလှဖို့ထကျ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးအတှကျ မဖွဈမနလေကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့၊ အစားရှောငျဖို့ လိုအပျနပေါပွီ။ ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီ% တှအေရမျးမြားနပေါတယျလို့။
ကဲ ယောငျးယောငျးတို့ ဘယျနှယျရှိစ? ကိုယျက ဘယျအခွအေနထေဲ ရောကျနပွေီလဲ?
အခု အဆီ% ကိုကွညျ့တယျဆိုတာ ပိနျတာဝတာ၊ လှတာမလှတာထကျ ကနျြးမာရေးကိုပိုပွီး လိုကျစားစခေငျြလို့ ရေးလိုကျတာပါနျော။ မြိုးရိုး၊ ဟျောမုနျးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျပုံစံကို လိုကျပွီး ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားက အမြိုးမြိုးပွောငျးလဲနိုငျသေးတာမို့ အဆီနညျးအောငျ နရေငျပဲ ရပါပွီလို့။
ဒီနတေ့ော့ ဒီလောကျပါပဲရှငျ။ နောကျနတှေ့မှောလညျး တခွား Fitness ဆောငျးပါးလေးတှေ ထပျတငျပေးဦးမှာမို့ ဆကျဆကျစောငျ့ကွညျ့ဖို့ မမနေဲ့နျော!!!
Tags: %, Body, Fat, fit, good, Healthy, obese